Ogaden News Agency (ONA) – Ethiopia oo raadinasya Barnaamij ay kaga hortagto Cadeymihi laga daawaday SVT
Ethiopia oo raadinasya Barnaamij ay kaga hortagto Cadeymihi laga daawaday SVT
Taliska Ethiopia ee Tigreegu u taliyo ayaa labadi todobaad ee lasoo dhaafay baadi goob adag ugu jira sidii ay uga jawaabi lahaayeen Filimadi iyo caddeymihii lagu soo bandhigay warbaahinta Caalamka gaar ahaan Wadanka Sweden SVT. Ethiopia ayaa lagu cadeyay sida foosha xun ee ay ula dhaqanto maxaabiista iyo xasuuqa ay kawado Ogadeniya.
Iyada oo caalamka loo soo bandhigay Wariyaashi ree Sweden qorshihii beenta ahaa ee lagu soo xidhay, jidh dilkii loo geystay iyo dhaawaci halista ahaa ee xabada Ciidamada Ethiopia ugu dhufteen. iyo waliba cadaalad darada maxkamada Ethiopia oo ah mid lagu hoggaamiyo siyaasada Woyanaha. Waxaa lawada oggsoona in qorshahan uu ahaa mid siyaasadeed oo illaa ciidanka illaa raysal Wasaarihi dhintay Zenawi isku xidhnaa. kaligi taliyihi Zenawi waaki sheegay in dadkaas ay galeen danbi lana xidhayo xabsi dheer iyada oo maxkamad la hor keenin ayuu hadalkaas ka sheegay Norwey. Waxa Zenawi uu oggaa filimaanta beenta ah ee laga duubay ee cadeynta loogu adeegsaday.
Sidoo kale waxa caalamka la horkeenya filimaan gumaadka Ciidamada Woyanaha iyo kuwa u adeega ee Liyu polisku ku hayaan shacabka Ogadeniya. Iyada o wali filimaan badan oo kale la hayo lalana sugayo waqtigeeda.
Hadaba Ethiopia oo talo ku cadaatay ayaa bilaabay olole ay howlahaas kaga hortagaan sidii lagu yaqiinay. Warbixinti Human Rights Watch ay soo saartay 80 magaalo ee la gubay iyo xasuqi dadka lagu gumaadayay. Ethiopia waxay markiiba isku dayday inay sameyso koox filimaan wata oo soo duuba goobihi lagu sheegay in la gubay. Kooxdaas oo aheyd koox ka socota Dolwada Ethiopia oo ah kuwa la dacweyay ee dhulkaas gubay ayuunba meesha tagay oo dhahay waxba lama gubin.
Waqtigaas iyada ah UN-ta waxay codsatay in dhulka Ogadeniya loo fasaxo oo xaqiiq raadin loo diro soo cadeeya xasuqa Ogadeniya ka jira. Ethiopia si cad ayay u diiday. Waxaana marar badan codsigaas oo kale dib u dalbaday UN-ta oo hadiyo jeer Ethiopiana ay diidaysay iyaga oo marmarsiiyo wado. Ilaa maanta waxa socda doodaas ay UN ku codsaneyso loo diro gudi xaqiiq raadin ah Ogadniya Ethiopiana waa diiday. Walibana Ethiopia halkaas kumay joogina dhamaanba Haayadaha Xuquuql Insaanka ayay kasoo ceydhisay Ethiopia iyada oo siisay warqado oggolaansho ah Haayadaha UN-ta ee macawamada oo iyana loo shegay hadii ay hadlaan in laga saarayo Ogaden.
Qorshe kii lamid ah ayay Ethiopia bilowday oo ay rabto inay jawaab ku bixiso. Waxaa Haayada Xuquuqul Insaanka Ethiopia ee loo yaqano Ethiopian Human Right Commission u fasaxday inay 119 xabsi oo ku yaala Ethiopia ay booqato haayadan wareysiyana kasoo saarto. Midaas oo Ethiopia rabto inay dhowaan tiraahdo Haayadu waxay soo oggaatay in Cid si xun loola dhaqmo aysan ka jirin Xabsiyada Ethiopia. Waxa lagu soo saaray SVT ama ay sheegeen Wariyaashi Sweden uu been yahay.
Waxa lawada ogyahay in Haayadan ay tahay haayad lagu dhisay Xeerka Ethiopia. iyada oo dadka fangareeya haayadan ay yihiin kaliya Dowlada Ethiopia. Ethiopia waxay haayadaha Xuquuqul insaanka u diiday inay qaataan deeq ka baxsan ka Ethiopia. Hayadi lacag kale heshana laga qaadayo xilka. Sidaas awgeed haayadan maahan mid madax banaan waxayna sheegi doonta oo kaliya waxa loo yeedhiyay hadiiba ay warbixin soo saarto.
Waxa aynu wada daawanay Barnaamijki Al Jazera ee caddow kaso diyaariyay Ogadeniya. Waxa Al-jazera xaqiijisay in Wax madax banaan laga duubi karin Ogaden.
Ururuka ONLF ayaa bayaan ku aadan arrintaas soo saaray Hoos ka aqriso Linkiga;